Gịnị bụ Afrocentricity? - Afrikhepri Foundation
Kedu ihe bụ Afrocentricity?
Dr. Molefi Kete Asante Prọfesọ na Ngalaba African American Studies Temple University Philadelphia, PA.
Dr. Molefi Kete Asante bụ onye okike nke mmemme doctoral mbụ nke ụwa na African American Studies, onye edemede nke ihe karịrị akwụkwọ edemede 200, yana onye guzobere Afrocentric Philosophical Movement na National Afrocentric Institute.
Maka Molefi Kete Asante, o zughị ezu ịza ọdịbendị nke Afrika, iyi uwe Afrika na iji ihe ndị Africa na ihe ndị e ji eme ihe iji kwupụta Mmetụta. Nke a bụ nanị Africa. N'otu ụzọ ahụ, ịgụ abụ ozioma maka Afrika nke Amụma bụ omenala, omume, ezinụlọ, mana ekwesịghị ịbụ okpukpe, ihe ndị a abụghị ndị na-eche banyere ọdịda onwe ha ma dabere na ntinye onwe ha na Africa na ụkpụrụ ya. .
O doro anya na ọ dị mma ịkwado ndị ojii, ndị Afrika nke America, na ụwa na agha ha kwa ụbọchị megide mmegbu. Nke a bụ ihe gbasara Martin Luther King na Malcom X. Ma nke ahụ anaghị eme ka àgwà dị na Afrocentric. Martin Luther King ma ọ bụ Malcom X bụ Afrocentric, ọ bụ ezie na a pụrụ ịtụle nke ikpeazụ a na ụzọ Mbelata.
Mmetụta na-enweghị nchekasị bụ nkwupụta nke mgbanwe mmekọrịta mmadụ na eze na karịsịa otu usoro omume nke na-amalite site na ọnọdụ uche nke uche uche, n'ụzọ bụ isi. Ọ bụ onye na-etinye aka na Africa, n'etiti obi ọhụụ nke ụwa, nchegbu ya, nsogbu ya, nsogbu ya, ọrụ ya. Afrika bu le isiokwu. Ọ bụ maka ilele ụwa anya site na echiche nke ọdịnala na ụkpụrụ Africa. Echiche a gafere akụkụ niile nke ndụ, sayensị, nkà ihe ọmụma, akwụkwọ, akụnụba, mbara igwe, ndọrọndọrọ ọchịchị, Africa bụ isiokwu… .
Dika onye French ga-eme ka uwa buru nani French, otutu African-American, Afrika nke ndi ozo kwesiri inwe Afrika dika ebe etiti, ebe omuma. Ndị ọzọ na-abịa site na nke a echiche. Ma Africa ma ọ bụ ihe ndị ọ na-eme adịghị mma, Otú ọ dị. A na-eme mgbanwe, a na-achọ nkatọ, ọ dị mkpa ka ndị Afrika nọ n'ụwa merie ime ihe ike na-adabere na okike, esemokwu agbụrụ, na ihe ndị ọzọ.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe na-emegide Eurocentrism. Ọ gaghị abụ ịkpa ókè agbụrụ. Ma oburu na Luther King abughi ndi ozo n'agbanyeghi na aghaghaara agha nke ndi Afrika n'Afrika, obu n'ihi na agha ya n'aha ndi Kristain ma obughi n'onu nke Afrika.
O siri ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, ịbụ Afrocentric kpamkpam na mba dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa, ọbụnadị maka Africa nke si na Continent. Ọzọkwa, taa, enweghi ike ịbụ onye ndú Afrocentric Afrịcentric, bụ onye na-ewere ọhụụ nke ụwa nke ụwa, omenala okpukpe na omenala ndị Africa. Mgbagwoju anya na-agbagha n'onwe ya, ụbọchị onye ndu Afrocentric ga-enwe ike n'Africa, a ga-enwe mgbanwe na-akpaghị aka.
Mmetụta ọhụụ na-egosi njirimara ọhụrụ, itinye ego iji mee ka ọdịbendị na ọdịbendị nke Africa gbasaa, mmekọrịta nke ndị nna nna, ụzọ ha si enweta akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, omume ọma. Ọ dị mkpa ka etinye ya n'etiti etiti ịdị adị ya, Eziokwu, Ikpe ziri ezi, Ụdị, eriri ahụ nke mba Negro-Africa nke Farao nke Ijipt ji ike echiche Maat. Ọ bụ uru kachasị elu, ụkpụrụ nke uru bara uru nke na-enye ohere ka mmekọrịta ọzọ na akụnụba dịka ọmụmaatụ, dabere na ntụgharị, ụba ahịa nke ahịa mana banyere omume, azụmahịa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. ịmara ndị na-eme ihe nkiri.
Ihe atụ nke Afrocentric: Maka otu Renaissance nke Afrịka (Mbipụta Bekee)
Zụta € 13,37
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 10, 2021 5:23
Amụma nke ndị poopu - Akwụkwọ nke 2016 (Amụma)
Okwu mmalite site n'aka Tanella Boni maka "Okwu mkparịta ụka maka ọmarịcha foduru" nke Grobli Zirignon kwuru
Kedu ka esi eme ka ọbara gị dị ọcha?
Inye mmadụ na anyanwụ - Alice Bailey (PDF)
Afọ Aquarius (PDF)